NYI LYNN SECK 18+ DEN: ကော့ဂွန်းဂူ
Posted by NLS at 1/20/2012 09:27:00 AM
11 Responses to “ကော့ဂွန်းဂူ”
စိတ်နာနာနဲ့ ပုံတွေ တင်ထားသလား အောင်းမေ့ရတယ်...။
တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတော့ ပုံတွေမြင်ရတာ ကြည့်ရတာ တန်တယ်...။
ကိုညင်းဆက်ရဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ရရင် တစ်ခုခုတော့ ရသွားတာပဲ။ အခုလည်း ပုံတွေ ကြည့်ရတာ ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလိုပဲ။ အားရင် နောက်ထပ်ပို့စ်တွေ ထပ်ရေးပါဦး။ မျှော်နေမယ်နော့။
ကျေးဇူးတင်. ဂုဏ်ယူ. ဝမ်းမြောက်.။ အံသြ. မရောက်ဘူး. အများသိ..စေရန် ဆန္ဒများဖြစ်. တိမ်မြုပ်နေသလိုခံစားရ. ကိုယ်တိုင်ဗဟုသုတနည်းပါးလို့လည်းဖြစ်နိုင်.. ဒါ ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံ ကပါဆိုတာကို ဂုဏ်ယူချင်. တိုင်းတပါးသို့. tourist attraction ဖြစ်စေချင်.. ဒါလောက်မကောင်းတာတွေ attraction ဖြစ်နေတာတွေ တိုင်းတပါးမှ မြင်နေရ. ငါတို့တွေ လုပ်စားတတ်ဘို့လိုသေးတယ်လို့ခံစားရ..ဟေ့ (ပေါ့) ဟုဖတ်ပါ. (ဘားအံမြို့မဝင်ခင်ပော့။)
ကော့ကွန်းဂူကိုအေးအေးဆေးဆေးရောက်ဖူးပေမယ့် မင်စာတွေ ကျောက်စာတွေ၇ှိမှန်းခုမှ သိရတယ်။
အကြွေးကျေဘုရားလို့ ဘွဲ့တပ်ထားတဲ့ ဘုရားတစ်ဆူလည်း ရှိတယ်ထင်တယ်။
I had never been arrived at ကော့ကွန်းဂူ.
၁၉၉၈ လောက်က ရောက်ဖူးတယ်။ မယ်တော်မာယာ သားတော် ဖွါးခန်းရုပ်တွေက အပြင်က သယ်လာတာ၊ မူလက မရှိပါဘူး။ ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှက တစ်ခါတုန်းက စောင်းပါးရေးဖူးတယ်။ ၁၉၉၀ လောက်ထင်တယ်။ မမှတ်မိတော့ပါ။
ရဲဘော် သူရိန် said...
ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရတာ အားရစရာဗျာ...။ တစ်ခေါက်လောက်တော့ မရောက်ရောက်အောင် သွားဦးမယ်ဗျိုး...
Ko Nyan said...
အရင်ထက် ပိုပြီး လက်တွေတက်လာသလိုပဲ။
ဘလော့ဂ်မှာ စာတွေပြန်ရေးတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။
သြော်.. ဒါနဲ့ စကားမစပ် အချို့စာလုံးတွေက ဖတ်လို့မရဘူးခင်ဗျ။ ဖောင့်တော့ မပြောင်းသေးဘူး ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက ဇော်ဂျီပဲ ခေတ်မမီတော့တာလား မသိဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
နံရံပေါ်က လက်ရာတွေကလည်း တကယ်ကို အံ့မခန်းပါဘဲ
ဒီပို.စ်ကိုဖတ်ပီးဘာကောက်ချက်ချမိသလဲဆိုတော. ပုံတွေကောင်းတယ်။တကယ်ရောက်နေသလိုခံစားရတယ်။ ကော.ကွန်းဂူ ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး ။ ညီလင်းဆက်ရဲ. ပိုစ်.ကိုဖတ်မိပီး သွားလည်မဲ. နေရာစာရင်းထဲ ထည်.လိုက်ပီ။